Public Kura | » रूपन्देहीको कुन पालिकामा कतिले लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? रूपन्देहीको कुन पालिकामा कतिले लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? – Public Kura
रूपन्देहीको कुन पालिकामा कतिले लिए उम्मेदवारी फिर्ता ?
भैरहवा– स्थानीय निर्वाचनका लागि रुपन्देहीका पालिकामा विभिन्न पदमा मनोनयन दर्ता गराएका १ सय १३ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
उनीहरुले शुक्रबार सम्बन्धित पालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पु्गेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । आइतबार र सोमबार मुलुकभर मनोनयन दर्ता भएको थियो । कतिपय ठाउँ बागी र स्वतन्त्रले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका कारण मनोनयन गरेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
जिल्लाका १६ स्थानीय तमध्ये १५ पालिकाबाट विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरुले फिर्ता लिएका हुन् । मर्चवारी गाउँपालिकाबाट कसैले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा मनोनयन दर्ता गरेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । यहाँ २७ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार बुटवलबाट ४ जना प्रमुख, ४ जना उपप्रमुख र १९ जना वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा मनोनयन गराएकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । कंचन गाउँपालिकाबाट ३ जना, कोटहीमाईबाट ५ जना, गैडहवाबाट २ जना, तिलोत्तमाबाट ९ जना र देवदह नगरपालिकाबाट १४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
यस्तै, ओमसतिया गाउँपालिकाबाट ३ जना अध्यक्षसहित २३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । मायादेवी र रोहिणीबाट १–१ जना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबाट २ जना, शुद्धोधनबाट ६ जना, सियारीबाट ६ जना, सैनामैनाबाट ४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएका छन् ।
यसैगरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट ६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले अन्तिम समयमा आएर तालमेल गरेपछि नगर प्रमुखबाट एक जना, उपप्रमुखबाट २ जना र सदस्यबाट ३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।
सम्मरीमाईबाट पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्रबाट ३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा निवर्तमान पालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लुकी श्रीमती पनि रहेकी छन् । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन । सम्मरीमाईबाट ४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गराएका छन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता गराउनेमध्ये अधिकांश गठबन्धन र स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसका अलावा अन्य पार्टीका केही उम्मेदवार पनि छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले हाल इच्छा नभएकाले स्वेच्छाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम नाम फिर्ता लिएका हुन् । केहीले, नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयको पत्रानुसार उम्मेदवारको सूचीबाट नाम हटाएका छन् ।
१ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाँउपालिका रहेको जिल्लामा मेयर पदका लागि ८५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, १२४ जनाले पालिका अध्यक्षमा, ७० जनाले उपप्रमुख, ९५ जनाले उपाध्यक्ष, १०८९ जनाले वडाध्यक्ष र ३५४८ जनाले वडासदस्य गरी जम्मा ५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जिल्लामा ६ लाख ३२ हजार ३६० मतदाता छन् । निर्वाचनमा सहभागी दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेछ । शुक्रबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै आयोगले आज साँझ ५ बजेसम्म चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने जनाइएको छ । चुनाव चिह्न पाएसँगै उम्मेदवारहरूले मौन अवधि सुरु हुन अघिसम्म निर्वाचनमा मतको लागि प्रचार–प्रसार गर्न पाउँछन् ।